I-5 ExxonMobil Scholarship yaBafundi beZidanga zokuqala kunye nabaFundi beNigerian 2022
I-5 ExxonMobil Scholarship yaBafundi beZidanga zokuqala kunye naBafundi baseNigeria
Apha, uya kufumana zonke iinkcukacha, kubandakanya amaxwebhu afunekayo kunye nenkqubo yokwenza isicelo seNNPC kunye ne-ExxonMobil yezifundo zokufunda. Izifundo eziboniswe kweli nqaku zezabafundi baseNigeria abaphumelele isidanga kwaye baxhaswe ngokudibeneyo yi-NNPC kunye ne-ExxonMobil.
Ukufundiswa kwezifundo kuyilelwe ukubonelela ngenkxaso yemfundo kubafundi. Bahlala benikwa abafundi ababalaseleyo abaneemfuno zemali ukubakhuthaza ukuba basebenze nzima kwizifundo zabo. Nangona kwimeko yokufunda kakuhle, imvelaphi yezemali yomfundi ayiqhelekanga kuthathelwa ingqalelo.
Isifundiswa saseNigerian ExxonMobil senzelwe ngokulinganayo ukukhuthaza abafundi baseNigeria kunye nabaphumelele kwizidanga abafundileyo. Zonke izibonelelo zokufunda zinikezelwa kuphela ngokusekwe kumgangatho.
Izifundo zesidanga sokuqala zivulelekile kwizicelo ezivela kubafundi baseNigeria abakwiinkqubo zesidanga sokuqala nakoluphi uqeqesho olungezantsi;
Kufuneka ube sele ungumfundi wesidanga sokuqala kulo naluphi na olu luhlu (ngaphezulu kunokongezwa kwikamva ukuze uhlale usenza imibuzo ngaphambi kokufaka isicelo) ukuze ukwazi ukufaka isicelo se-Exxon-Mobil undergraduate scholarship njengomfundi waseNigeria.
Njengoko kuchaziwe kwiwebhusayithi esemthethweni ye-ExxonMobil, “i-ExxonMobil yenye yezona ndawo zinamandla amakhulu kurhwebo lwasesidlangalaleni kunye nemichiza eyenziweyo ukuphuhlisa nokusebenzisa itekhnoloji yesizukulwana esilandelayo ukunceda ngokukhuselekileyo nangokufanelekileyo ukuhlangabezana neemfuno ezikhulayo zehlabathi zamandla kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu. ”
Inkampani, i-ExxonMobil, ibonelela ngamabhaso okufundela abafundi abaphezulu baseNigeria ukuba baxhase imfundo yabo ephezulu kunye nemincintiswano yemibuzo yabafundi bezikolo eziziiprayimari neziziisekondari apho bafumana ukuphumelela amaxabiso amaninzi.
Lilonke, i-ExxonMobil ayisi galelo nje kwilizwe lezamandla kodwa ikwandisa negalelo layo ekuncedeni nasekuxhaseni ngemali imfundo yabafundi kwizifundo eziphambili eziza kuba negalelo kwinkqubela phambili yelizwe kunye nehlabathi liphela.
I-ExxonMobil MPN yezifundo zodwa zinikezelwa minyaka le kubafundi abangama-500 abaphumelele isidanga kwiiyunivesithi zaseNigeria abakulo naluphi na uqeqesho endiludwelise apha ngasentla kwaye kufuneka ukuba ndenze isicelo namaxwebhu ayimfuneko kunye neenkqubo zesicelo endizichaze kakuhle apha ngezantsi.
Nangona kunjalo, abafundi abakulungeleyo ukuphumelela i-ExxonMobil yamazwe aphesheya ye-PG baxhaswa ngemali unyaka omnye nangona oku kunokuphinda kuhlaziywe ukuba umfundi uqhubeka ngokuqhuba kakuhle kwezemfundo kunye neengxelo ezinxulumene neziko ezifana nokuziphatha okuhle, ukuthatha inxaxheba ngokukuko kwimisebenzi eyongezelelweyo yekharityhulam , igalelo elifanelekileyo kuqeqesho lwabo njalo njalo.
Njengophumeleleyo kwizifundo ze-ExxonMobil kwaye uqhubeka nezi ngxelo zingasentla ungagqibezela imfundo yakho yesidanga sokuqala ngaphandle kokuhlawula iifizi zokufunda.
Enye iphakheji enomdla eza nokuphumelela i-ExxonMobil yokufunda kukuba wena KUNYE Ngokwenyani banompu ekusebenzeni ne-ExxonMobil okanye ezinye izinto ezinxulumene nayo ezinjenge-NNPC (iNigerian National Petroleum Corporation), i-MPN (yokuvelisa iMobil eNigeria) njl, eyimibutho emikhulu kwicandelo lemveliso yamandla eNigeria.
Kodwa, qaphela ukuba ukuba ungowokufumana ibhaso le-Exxon Mobil yokufunda ibhaso ayikufanelanga ukuba ufaneleke ukuba uqeshwe ngumbutho xa uthweswe isidanga kodwa eli lithuba nangoku.
Yimalini i-ExxonMobil scholarship yamaNigeria?
Ixabiso elichanekileyo okanye ixabiso le-scholarship alichazwanga ngokuthe ngqo, kuphela ukuba kunikezelwa ngonyaka kwi-500 yabafundi besikolo esiphantsi ngefestile yonyaka omnye kodwa ingahlaziywa kule minyaka elandelayo kwaye ukuba i-awardee igcina iirekhodi eziphezulu zezemfundo kwaye uqeqesho.
Iqala nini i-ExxonMobil scholarship yamaNigeria?
I-NNPC Exxon-Mobil yezifundo zihlala zivula ukufumana izicelo ezintsha phakathi enyakeni (ngoJuni noJulayi minyaka le).
Uphi umhla wokugqibela we-ExxonMobil?
Isicelo seNNPC cum Exxon-Mobil yezifundo zihlala ziphela ngo-Agasti ngonyaka.
Uphi i-ExxonMobil eNigeria?
I-ExxonMobil ibekwe kwiindawo ezininzi eNigeria ezineeofisi eziphambili ezisixhenxe. Kunye neeofisi ezimbini eLagos State ngokuchanekileyo iVictoria Island kunye neApapa, ezinye ezimbini kwiRivers State kwiFederal Ocean Terminal, eOnne naseBonny River Terminal.
Ababini eAkwa Ibom eUyo naseQua Iboe Terminal emva koko, enye e-Abuja.
Ngaba i-ExxonMobil scholarship iyafana kunye ne-Mobil scholarship?
I-Exxon Corporation kunye nenkampani yeMobil zidityanisiwe, yiyo loo nto besenza umsebenzi omnye kunye nezifundo. Ke isifundo se-ExxonMobil sinye siyafana nesifundi seMobil.
I-NNPC Exxon-Mobil Scholarship
Zintathu iinkqubo zokufunda kunye neenkqubo zemibuzo ezi-3 ezixhaswe ngokudibeneyo yi-NNPC kunye ne-ExxonMobil kuyo yonke iNigeria yabafundi baseNigeria kumanqanaba ahlukeneyo aqala kwisikolo samabanga aphantsi ukuya kwisikolo samabanga aphakamileyo ukuya kuthi ga kwinqanaba leyunivesithi. Apha ngezantsi kukho la mabhaso;
IiMbasa zeMPN Scholarship
Amabhaso e-EEPNL Scholarship (aseKhaya nakwamanye amazwe)
I-NNPC / MPN / STAN Quiz kaZwelonke
Ukhuphiswano lwezeNzululwazi kwi-Akwa Ibom state
I-ExxonMobil MPN Scholarship Awards
Ukuveliswa kweMobil eNigeria, Amabhaso ee-MPN Scholarship ngokudibeneyo axhaswe ngemali ngu-ExxonMobil kunye neNigerian National Petroleum Corporation (NNPC) amabhaso ama-500 abafundi abaphantsi kwabafundi minyaka le kubafundi abafundileyo baseNigeria.
Iinkqubo zobunjineli kunye nezeGeosciences zesidanga sokuqala zithatha iipesenti ezingama-60 zesabelo-mali se-NNPC / MPN, ngelixa iipesenti ezingama-40 zezinye izifundo ezivunyiweyo zeshishini nezoluntu.
Uninzi lwamabhaso okufundwa kwe-MPN ayenza ukuba isebenze neMobil Nigeria emva kokuthweswa kwabo isidanga eyunivesithi nangona kungekho siqinisekiso sokuba uMobil uya kwamkela onke amabhaso okusebenza nabo.
I-ExxonMobil EEPNL yeeBhaso zeeScholarship
Uvavanyo lwe-Esso kunye neMveliso yaseNigeria, Ltd ngokusebenzisana ne-ExxonMobil amabhaso amabini ahlukeneyo kwizifundo zokuthweswa isidanga kubafundi baseNigeria.
I-ExxonMobil EEPNL yamabhaso eScholarship aphesheya
I-ExxonMobil i-EEPNL yeNgingqi ye-Post-graduate Scholarships
I-ExxonMobil kunye ne-EEPNL yeebhaso zokufunda ezixabisa ukuya kuthi ga $ 60,000 yeenkqubo zokuthweswa isidanga sonyaka omnye kwaye $ 80,000 kwiminyaka emibini yokuthweswa isidanga kubafundi baseNigeria ukuba bafunde phesheya.
Abafundi abaphumelele kwi-10 bayakufanelekela ukufumana le mfundo eNigeria minyaka le. Isifundi sihlala sonyaka omnye wokufunda xa sele sinikezelwe kodwa sinokuhlaziywa ukugubungela ixesha lokufundwa okuvunyiweyo (kwabo inkqubo yabo yokuthweswa isidanga phesheya iya kuthatha ngaphezulu konyaka ukugqiba).
Ukuhlaziywa kusekwe kwintsebenzo yabamkeli kunye neengxelo ezinxulumene noko ezivela kumaziko ke kulindeleke ukuba ibhaso ligcine iirekhodi eziphakamileyo zemfundo kunye nokuziphatha ukuze zikwazi ukufumana uhlaziyo lokufunda emva konyaka.
I-ExxonMobil International i-post-graduate scholarship award iyona kuphela yabafundi baseNigeria kwii-Geosciences kunye nezoBunjineli. Abafakizicelo abaphumeleleyo kufuneka bafunde eUnited States okanye eUnited Kingdom.
Amabhaso e-ExxonMobil EEPNL endawo yokuthweswa isidanga kwabafundi baseNigeria abafuna ukuthatha iinkqubo zesidanga sokuqala eNigeria nabo. Yinkqubo yokukhuphisana kakhulu nangona ingakhuphisani njenge-EEPNL yamazwe aphesheya ye-PG.
Abafundi abaninzi abaphumeleleyo bakhethelwa le mfundo minyaka le kwaye igqitha ngaphaya kweGeoscience kunye necandelo lobuNjineli ngokungafaniyo nenye. Ukuhlala apha kukuba abafundi abavela kwezinye iinkalo zokufunda ngaphandle kwezi zimbini banokufaka isicelo kwaye baphumelele imali yokufunda.
I-scholarship yaqala ngo-2007 kwaye igcinwe ukususela ngelo xesha kude kube ngoku.
ExxonMobil NNPC / MPN / STAN Quiz kaZwelonke
Iminyaka eliqela, i-NNPC / iMobil evelisa iNigeria Joint Venture (JV) ibingumxhasi wegama kwi-National Quiz kunye neProjekthi yoKhuphiswano, eququzelelwa minyaka le nguMbutho wooTitshala beNzululwazi waseNigeria (STAN).
Olu khuphiswano lukazwelonke kwaye luvulelekile kubafundi bezikolo eziziiprayimari nakwizikolo zasesekondari eNigeria.
Ukhuphiswano lwe-ExxonMobil yezeNzululwazi kwi-Akwa Ibom state
Ukhuphiswano lwezeNzululwazi ngezeNzululwazi olwaziwa kakhulu njengoMceli mngeni weZikolo e-Akwa Ibom urhulumente ujolise ekuphuculeni indlela abaqhuba ngayo abafundi kwiimviwo zesayensi, kunye nokukhuthaza ukufundwa / ukufundiswa kwesayensi kwizikolo eziziisekondari kwilizwe liphela.
Ngaphezulu kwezikolo ezingama-360 ezizimeleyo nezikarhulumente eAkwa Ibom zingenela olu khuphiswano minyaka le. Eli nani lenyuke ngaphezulu kwama-300 xa kuthelekiswa nelixa ukhuphiswano lwaluqala ukubanjwa kurhulumente ngo-2003 nezikolo ezingama-62 kuphela ezithathe inxaxheba.
Ungasifaka njani isicelo se-ExxonMobil Scholarship yaBafundi beNigerian undergraduate Student
Ngubani onokufaka isicelo seSexonMobil scholarship eNigeria?
Ngokucacileyo yeyabemi baseNigeria kuphela kodwa ayisiyiyo yonke into efunekayo ukufaka isicelo kunye nokupasa isifundi se-ExxonMobil, kukho iindlela ezithile zokufaneleka kunye namaxwebhu abafaki-zicelo abanomdla ekufuneka babenawo ngaphambi kokufaka isicelo sokufunda
Ukufaneleka kwe-ExxonMobil Scholarship zezi zilandelayo;
Abafakizicelo kufuneka bayigqibile imfundo yamabanga aphakamileyo kwaye babhale uviwo lwe-WASSCE okanye elilinganayo, njenge-GCE, i-NECO njl.njl, kunye nezifundo ezintandathu ubuncinci abaphumeleleyo behleli ubuncinci be-5.
Abafakizicelo kufuneka babhalise kwiyunivesithi yaseNigeria eyamkelweyo kwaye babonise ubungqina bayo njengeleta yokwamkelwa yeJAMB okanye naluphi na uxwebhu oluqinisekisa ukwamkelwa kwabo kwiziko lemfundo ephakamileyo.
Abafakizicelo kufuneka babe nekhadi lesazisi eyunivesithi.
Abafakizicelo kufuneka babe kunyaka wabo wokuqala okanye wesibini wokufunda, babhalise kwikhosi yesayensi yexesha elizeleyo.
Abafakizicelo kufuneka banikezele uxwebhu lonyaka wabo wokufunda
Unelizwe lokuchonga imvelaphi kurhulumente wengingqi ekufuneka lisayinwe ngusihlalo okanye unobhala kurhulumente wengingqi yakho.
Nikezela ngemifanekiso yakho yokundwendwela yangoku.
Abagqatswa abafakwe kuluhlu olufutshane kulindeleke ukuba beze nazo zombini iikopi kunye neefotokopi zawo onke amaxwebhu adwelisiweyo, ukuze kuhlolwe ngaphambi kokuthatha uvavanyo olufanelekileyo.
Sukufaka isicelo ukuba okwangoku ukwisifundi esifanayo esivela kwenye inkampani yemveliso yeoyile kunye negesi.
Ke, apho unoluhlu lwezinto ezifunekayo ukufaka isicelo sobuxhakaxhaka be-ExxonMobil. Isicelo senziwa kwi-Intanethi ngenkqubo yesicelo se-ExxonMobil kwi-Intanethi.
Isiphelo kunye neNcomelo
Iimfuno zokufunda ze-ExxonMobil kunye nenkqubo yokwenza isicelo zidwelisiwe kwicandelo "lokufaneleka" kweli nqaku kwaye uqalise isicelo sakho.
Isifundi se-ExxonMobil sinceda urhulumente wobumbano waseNigeria kuqeqesho nasekuphuhliseni amandla aphakathi kunye nakwilizwe eliphezulu ngelixa ekonyusa indawo yokuhlwayela abagqatswa abanokuqeshelwa inkampani.
Yiloo nto ke uvule ithuba elincinci le-ExxonMobil yokufunda amabhaso okuyalela kwicandelo leoyile kunye negesi.
Nanga amanye amanqaku ethu anokukunceda;
I-NNPC-DRM Scholarship yaBafundi baseNigeria
Isicelo seMTN Scholarship | Imibuzo yasimahla kunye neempendulo zokuKhuphela
Indlela yokufunda kwelinye ilizwe kunye neScholarship kulo naliphi na ilizwe
I-10 yoBuchule boBugqirha baBafundi baBafundi beZizwe ngezizwe eCanada
Ulwabiwo-mali lwasekhaya Ukufundiswa kweNigerian
exxonmobil yokufundaInkxaso mali yokufundaIsifundi seMPCI-nigeria i-undergraduate scholarshipsIsifundi seNNPC
Post Previous:Iikhosi ze-15 zeYale zasimahla kwi-Intanethi zaBafundi kunye nabaSebenzi
Okulandelayo Post:Iikhosi ezili-13 zasimahla ezikwi-Intanethi zeNdawo ethengisa izindlu kunye neziQinisekiso